Guddiga doorashada Koonfur Galbeed oo u ogolaaday Mukhtaar Roobow in uu u tartami karo madaxtinimada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGuddiga doorashada Koonfur Galbeed oo u ogolaaday Mukhtaar Roobow in uu u tartami karo madaxtinimada
November 3, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Roobow ayaa olole balaaran ka waday magaala Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed asbuucyadii lasoo dhaafay. [Sawir Hore]
Baydhabo-(Puntland Mirror) Guddiga doorashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa u ogolaaday Mukhtaar Roobow Abu Mansuur in uu u tartami karo madaxtinimada maamulkaas, sida ay wararku sheegeen.
Roobow Abu Mansuur oo ahaan jiray guddoomiye ku xigeenka maleeshiyada Al-Shabaab ayaa bishii Agoosto ee sanadkii 2017 iclaamiyay in uu ka baxay Al-Shabaab.
Waxa uu olole balaaran ka waday magaala Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed asbuucyadii lasoo dhaafay.
November 5, 2018 Roobow oo la siiyay waraaqda aqoonsiga musharaxnimada maamul goboleedka Koonfur galbeed
Boosaaso-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa maanta oo Sabti ah magaalada Boosaaso ku qabatay barnaamijka labaad ee biyo dhaanka gurmadka abaaraha. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo kulanka lagu daahfurayay baarnaamijka labaad ee biyo dhaamiska ah [...]
Garowe-(Puntland Mirror) Al-Shabab armed group has vowed to assassinate the newly elected Somali parliament members, MP said. A Somali MP hails from Puntland, who asked not to be named, told to the Puntland Mirror by [...]